गैंडा सिकारीलाई १९ मुद्दा | चितवन पोष्ट दैनिक
गैंडा सिकारीलाई १९ मुद्दा
२०७१ चैत्र ११, बुधबार ०२:१४ गते
कसरा । आफ्नै हातले २० गैंडा मारेका राजकुमार चेपाङविरूद्ध चितवन निकुञ्ज कार्यालयमा दर्ता भएको मुद्दाको संख्या १९ पुगेको छ ।
चेपाङलाई चितवन निकुञ्ज कार्यालयले थप चारवटा मुद्दा चलाएको छ । उनीमाथि यसअघि नै १५ मुद्दा चलेको थियो । जसमध्ये छ मुद्दा फैसला भइसकेका छन् । चितवन निकुञ्जमा राजकुमारविरूद्ध विसं. २०६० सालको चैत १२ गते पहिलो पटक मुद्दा दायर भएको थियो । २० भन्दा बढी गैंडा मारेको आरोप लागेका उनी माघ २६ गतेमात्रै निकुञ्जको हिरासतमा आएका हुन् । यस समयमा उनलाई पक्राउ गर्न ठूलो कसरत चल्यो ।
नेपालबाट मलेसिया पुगेका राजकुमारलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिस जारी ग¥यो । गत वर्षको कात्तिकमा रेडकर्नर नोटिस जारी भएको थियो । यही माघ १६ मा उनी मलेसियामा समातिए ।
‘उनी निकुञ्जको हिरासतमा आएपछि अनुसन्धान हुँदा थप चार मुद्दा दायर भएको हो’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरको इजलासको आदेशबमोजिम चेपाङ मंगलबार नै भरतपुर कारागार चलान भएको सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद थपलियाले बताए ।
निकुञ्जले यसअघि फैसला गरेको सबै छवटा मुद्दामा राजकुमारलाई १५ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिबाना भएको छ । यो कैद र जरिबाना वन्यजन्तु अपराधमा हुने सबैभन्दा धेरै हो । राजकुमारमात्रै नभएर उनका गाउँले र आफन्तसमेत यो अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा चितवन निकुञ्जबाट सजाय पाएर जेलमा छन् ।
उनका जेठा दाजु दलबहादुर र माइला बलबहादुर कारागारमा छन् भने साइँला रामकुमार १० वर्ष जेल बसेर निस्केका हुन् । उनका चारजना मामा, एकजना भिनाजु, एकजना मामाको छोरा, एकजना जेठान, एकजना भाञ्जा र एकजना दाजुको छोरासमेत गैंडा मुद्दामा जेलमा रहेको चितवन निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णु थपलियाले बताए ।
अवैध रुपमा बेचबिखन हुँदै चीनमा जाने खागका लागि तस्करहरुले गैंडा मार्न निकुञ्ज आसपासका सोझा सर्वसाधरणलाई बढी उपयोग गरेको देखिन्छ । राजकुमार सक्रिय रहेको समयमा चितवनमा गैंडा सिकार अत्याधिक हुने गरेको थियो । उनी मलेसिया लागेसँगै गैंडा सिकार नियन्त्रणमा आएको छ ।
विसं. २०६० सालमा उनीविरूद्ध निकुञ्जमा मुद्दा दर्ता हुनुभन्दा पहिलेबाटै राजकुमार गैंडा सिकारमा सक्रिय थिए ।
नाम बदलेर विसं. २०६७ सालमा फर्जी नागरिकता र राहदानी बनाएर मलेसिया लाग्नुअघि उनले धेरै गैंडा मारे । धेरैलाई यो काममा संलग्न गराए । ‘मैले नै गोली हानेर २० वटा गैंडा मारे । त्यस्तै गोली लागेर अरु पाँच गैंडा घाइते भए’ राजकुमारले भनेका छन् ।
यी बाहेक अरुले मारेका थप दुईवटा गैंडाको खाग पनि आफूले बेचेको फागुन ३ मा पत्रकारमाझ उपस्थित हुँदा उनले बताएका थिए । नेपाल र भारतमा मात्रै पाइने एकसिंगे गैंडा लोप हुने अवस्थामा पुगेको दुर्लभ जनावर हो । यसको नाकमा हुने सिंगजस्तो वस्तु नै तस्करहरुले सिकार गर्छन् ।
विकट गाउँ कोराकका राजकुमारले विसं. २०६७ साल जेठ १० गते गोरखाबाट नागरिकता झिकेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनले भक्तराज गिरीको नाम लिएर गोरखाबाट नागरिकता लिएसँगै काठमाडौं पराराष्ट्र मन्त्रालयबाट ६७ सालकै जेठ २० मा राहदानी बनाएर सोही वर्षको असोज २६ गते मलेसिया गएका थिए ।
नोट ः चितवन निकुञ्जले आइतबार सार्वजनिक गरेको राजकुमार चेपाङको फोटो पनि छ ।